Monday January, 18 2021 - 10:01:49
Wednesday November 25, 2020 - 11:14:16 in by salman abdi
"Islamarkii uu xafiiska kasoo baxo, xaaladdu way isbaddali doontaa," ayuu yidhi Daniel R Alonso, oo ah dacwad ooge horay uga soo shaqeeyay federaalka Mareykanka iyo gobolka New York, oo la hadlayay BBC-da.
"Ma sii lahaan doono awoodda madaxweynenimada ee looga cabsado, loogana xishoodo in baaritaanno lagu sameeyo."
Stormy Daniels, oo magaceeda dhabta ah uu yahay Stephanie Clifford, waxay sheegtay inay Mr Trump gogol la wadaagtay sanadkii 2006
Dambiga hore wuxuu ku saabsan yahay sharci jabin dhinaca federaalka ah, ama qaranka, sharciyada iyo doorka Michael Cohen, oo ahaa qareenkii gaarka ahaa ee Mr Trump iyo "ninka arrimaha isku duway".
Michael Cohen, former attorney and fixer for President Donald Trump, arrives at the Hart Senate Office Building before testifying to the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill on February 26, 2019 in Washington, DC
Cohen wuxuu sheegay in Mr Trump uu "ku amray" isaga inuu lacagahaas bixiyo, haddana wali wax dacwad ah laguma soo oogin madaxweynaha. Maxay tahay sababtu?
Karen McDougal waxay raalli galin siisay Melania Trump, iyadoo ka raalli galineysa xiriirka ay la yeelatay seygeeda
"Sidaas darteed, maadaama lacagahaas la bixiyay waqti ka horreeya labo sano, waxay u muuqataa in [dacwad oogeyaashu] aysan nasiib lahayn," ayuu yidhi Mr Alonso.
Cyrus Vance wuxuu tan iyo sanadkii 2018-kii hoggaaminayay baaritaan lagu sameynayay shirkadda Trump
Wali qaabka dacwadahaas loo soo oogi karo ma cadda. Lama oga in dastuurka u yaalla New York uu oggol yahay in Trump loo maxkamadeyn karo ku xad-gudubka dhaqaalaha loogu talagalay ololaha - kaasoo sharciga federaalka uu xabsi ugu xukumay Cohen.
Waxa aan ka ognahay: Arrintan waa "weerar siyaasadeed", ayuu yidhi qareen u shaqeeya shirkadda Trump oo ka hadlayay kulan su'aalo lagu weydiinayay oo qeyb ka ah baadhitaanka Mr Vance uu sameynayay bishii August ee sanadkii 2019-kii.
"Baadhitaannada dambi ee ugu saameynta badan waa kuwa soo bandhigaya macluumaadka canshuur celinta Trump iyo kuwa bangiga," ayuu BBC-da ku yidhi barfasoor Jonathan Turley, oo macallin ka ah kulliyadda sharciga ee Jaamacadda George Washington. "Laakiin lama oga caddeymaha lagu heli doono inta ay gaadhsiisan yihiin," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Michael Cohen, oo arrimaha u fududeyn jiray Mr Trump, waxaa Golaha Wakiillada looga yeedhay bishii February 2019
Eric Trump, oo ah ku xigeenka madaxa shirkadda Trump, ahna madaxweynaha wiilkiisa, ayaa haweeneydaas ku eedeeyay inay "waddo cadaadis dhinaca siyaasadda ah".
Iyadoo ay arrintaas jirto, haddana wuxuu fuliyay codsi ay uga dalbatay inuu xafiiskeeda tago bishii October, si uu su'aalaheeda uga jawaabo.
Ms James waxay Mr Trump ku heli kartaa fursad ay xafiiskeeda ku geysto, kuna dhaariso ka hor inta aysan su'aalo weydiinta ku billaabin, isla sidii ay ku sameysay wiilkiisa.
Letitia James waxay su'aalo weydiisay Mr Trump wiilkiisa, Eric
"Inta badan maxkamadaha way u garaabaan madaxweyneyaasha marka ay mashquul sheegtaan. Laakiin sidaas uma sameeyaan muwaadiniinta caadiga ah," ayuu yidhi Mr Alonso.
Waxa aan ka ognahay: Kiisaskan waxay la xiriiraan eedeymo ku saabsan in lacago laga faa'iiday shaqaaleysiinta dadka ama maamulista xafiis loogu adeegayo shacabka.
Waxaa lagu eedeeyay inuu sharciga "shaqaaleysiinta" jabiyay intii uu madaxweynaha ahaa. Sharciyadan waxay ku xusan yihiin dastuurka dalka Mareykanka.
Mr Trump uu Mr Trump ku leeyahay Washington wuxuu mar walba bartilmaameed u ahaa mudaharaadeyaal intii uu xilka madaxweynaha hayay
Mid ka mid ah qodobbada sharcigaas wuxuu dhigayaa in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka, oo uu ka mid yahay madaxweynaha, ay fasax ka qaataan Aqalka Wakiillada ka hor inta aysan aqbalin faa'iido kasta oo kasoo galeysa dalal ajnabi ah.
"Sharciyada noocan ah uma badna inay usii gudbaan tallaabo ku saabsan dambi," ayuu yidhi Mr Turley, oo khabiir ku ah shuruucda ku xusan dastuurka.
"Dhhaam kiisaskan waxay salka ku hayaan Trump xilliga uu xafiiska madaxweynaha hayay, mar haddii uu xilka ka dagana way wada daciifayaan," ayuu yidhi.
Mr Trump wuu beeniyay dhammaan eedeymahaas, wuxuuna ku tilmaamay "war been abuur ah", iyo sheekooyin la siyaasadeeyay.
E Jean Carroll waxay Mr Trump ku eedeysay inuu kufsaday 1990-meeyadii
Tusaale ahaan, waxay cadaadis ku saari karaan maxkamada in dhacaanka DNA ee Mr Trump laga baadho dhar ay Ms Carroll sheegtay inay xirneyd xilliga uu "kufsanayay".
Waxa aan ka ognahay: "Musuqmaasuqa kuma uusan koobneyn ganacsiga qoyska - wuxuu ahaa hab nololeed," qoraalkaas wuxuu ku jiraa kiiska dacwadeed ee ay Mary Trumpka gudbisay adeerkeed Donald.
Waxay Mr Trump ku sheegtay qof halis galiya ruux walba oo muwaadiniinta Mareykanka ka mid ah. Buug ay ka qortay ayey kusoo bandhigtay arrimo badan oo ay uga hadleysay inuu yahay "qof qallafsan".
Mary Trump waxay buuggeeda ku xustay in adeerkeed uu yahay qofka ugu halista badan caalamka
Ms Trump waxay dhaxal u lahayd hanti qiimo leh oo ka mid ah ganacsiga qoyska, markii uu dhintay Fred Trump Jr - oo ahaa aabbeheed, sidoo kalena ahaa Trump walaalkiis ka weyn - oo dhintay sanadkii 1981-kii xilli uu 41 jir ahaa. Ms Trump waxay markaas ahayd 16 jir.
Gudaha:-"Qalbigiisa Anaa Og oo Madaxweynaha Hadalkiisa Waa La Siyaasadeeyey"Wasiir Hore Cadaani
15/01/2021 - 13:04:01
13/01/2021 - 10:35:24
12/01/2021 - 17:56:44
Madaxweyne Biixi Oo Bulshada U Diray Farriimo La Xidhiidha Iyo Sidii Loo Dooran Lahaa Dad Xilkas Ah
11/01/2021 - 16:16:25
07/01/2021 - 12:06:06
Madaxweynaha Puntland Oo daah-furay Ololaha Qof iyo Foosto Waddada Ceeldaahir-Ceergaabo.
06/01/2021 - 18:33:11
06/01/2021 - 17:13:51
Fashilka Dulhoganaya Madaxweyne Farmaajo Oo Lasoo Bandhigay Iyo Xaalado Xun Oo Soomaaliya Gashay Wakhtigii Uu Xilka Hayay
05/01/2021 - 09:32:17
Raffensperger oo sheegay in Trump 'uu galay khalad iska cad' kaddib wicitaankii doorashada la xiriiray
05/01/2021 - 09:22:33
03/01/2021 - 17:41:06